ब्राह्मणवादी घेराबन्दीमा इटहरीका मेयर द्वारीकालाल चौधरी - MONGOL KHABAR
ब्राह्मणवादी घेराबन्दीमा इटहरीका मेयर द्वारीकालाल चौधरी
काठमाडौ । जेष्ठ ३०, इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरी ब्यक्तिगत रुपमा चिनेको ब्यक्ति भने होइनन । यति चिन्छु, उनी इटहरीका मेयर हुन । उनी एक थारुको छोरा हुन । थारुहरु नेपालको भुमिपुत्र हुन । मूलबासी हुन । मंगोल हुन । एउटा चौधरी आज जेलमा भुक्तमान भोगी रहेछ । एउटा मिडियामा छाएका छन । दुवै जनप्रतिनिधि हुन । बिषय बस्तु भने फरक छन ।
रेशमलाल चौधरी टिकापुर काण्डको प्रमुख दोषी बनाइएका ब्यक्ती द्वारिकालाल पत्रकारलाई धम्काएकोमा दोषी देखाइएका ब्यक्ती । यो एउटा बाहिर देखेको कुरा हो । भित्री कुरा भने दुवै प्रतिनिधिहरु एउटै साझा समस्यामा छन त्यो ब्राह्मणवादी घेराबन्दी । एउटालाई घेराबन्दी गर्दै जेलमा एउटालाई घेर्ने कार्य भएको देखिन्छ । भुमिपुत्रको छोरो हुन द्वारिका र रेशम । दुवैजना दम्दार लाग्छन । तर के गर्नु यस्ता प्रखर ब्यक्तिहरु, इमानदार ब्यक्तिहरु विवादमा ल्याएर समाप्त पार्ने सैतानी राज्यका शासक भएकैले एक एक गरि सिध्याइन्छन ।
आज भुमिपुत्र गर्जिएका छन । त्यसरी गर्जिनु त्यो सोझो भुमिपुत्रको रहर होइन बाध्यता हो । मानव तस्करहरुको हातमा शक्ति भएकाले भुमिपुत्रलाई फकाउने,नमाने किन्ने र त्यो नमाने उतेजनामा ल्याउने र दण्डित गराउने यो सत्ताधारीको नियत हो । द्वारिकालाल चौधरी दुधले नुहाएका हुन भन्न खोजेको होइन । तर उनलाई पनि खेदो गर्ने बाहुनवादी मिडियाहरुको प्रस्तुती देख्दा मेयरलाई दमन गर्न भयंकर कोसिस भएकै मेरो लाटो अनुमान छ । त्यसै पनि नेपाली मिडिया स्वतन्त्र होइनन । बनिया (ब्यापारी) मिडिया हुन ।
व्यापार गर्ने बहानामा सत्य आवाज उठाउन भ्याउदैनन किनकी व्यापार बढाउन पुंजिपतीको चाकरी गर्छन । पत्रकारको नाममा आफ्नो गोजि भर्छन । बिभेदमा पर्नेहरुको आवाज सुन्दैनन । यसलाई इंगित गर्दा चाटुकार उपयुक्त हुनेहुदा सोझो मेयरले त्यही भने । शब्द चयनमा कम्जोर भयो भने तिनफुके मिडियाधारीले प्रश्न तेर्साएर पनि मेयरले सहि शब्द चयन गरेको प्रतिक्रिया दिए । वास्तवमा नेपालको मिडिया छन नै चाटुकार । जसले सामन्त र धनिवर्ग अनि सत्ताधारीको चाटुकार गर्छन ।
के भुमिपुत्र मंगोल हामी हाम्रो अधिकारको निम्ति ती पत्रुकारले लेख्छ्न ? के हाम्रो यथार्थ घट्ना लेख्छ्न ? प्रसारण गर्छन । बरु यिनिहरुको गल्ती कहाँ भेटिन्छ भनि खोज्छन र बेइज्जत गर्छन, पतन गर्छन आफ्नै समाजबाट ।
यो देशमा भुमिपुत्र मूलबासी मंगोलको लागि मिडिया छैन पत्रकार छैन । भएका मुलधारका मिडिया हाउस सबै बाहुनको कब्जामा छ । कान्तिपुर, नयाँ पत्रीका, नागरिक, अन्नपूर्ण देखि telivision सबैजसोको बाहुन मालिक छन । जो देशको बिभेदबारे बोल्दैन किनकी उनिहरु धनाध्यको सेवा गर्दै भजन गाउदै समय बित्छ । गल्ती वा मानहानि गराउन वा खुइलाउन भने छिटो छ । किनकी त्यो बापत उसलाई ती बर्गको साथ मिल्छ । अब बुझ्नुस उसले अन्यायमा परेका उत्पीडनमा, बिभेदमा परेकाको प्रतिनिधि हुनु पर्ने आम जनता राज्यको पुल बन्नु पर्ने उल्टो एउटाको पक्ष पोषण गर्छ भने उ पत्रकार हुन्छ ? मेयरको कुरा सहि हो ।
सोझो बोल्दैन । सोझोलाई बोल्न कि घोच्नु पर्छ कि दुखाउनु पर्छ त्यसपछि मान्छे मारेको थाहा पाउदैन । मेयरलाई बनाएको त्यस्तै हो । जो बाहुनबादी डिजाइनमा जिस्काउने काम भयो । बाध्यता बनाइयो र मेयर कराइरहेका छन । अब नेकपाले यहि झोंकमा कार्बाही गर्न पनि बेर छैन । यदि त्यसो गरे सोच्नुस के होला ? यसरी नै उत्तेजित बनाएर, बाध्य बनाएर अन्तमा समाप्त पार्ने यो चतुर्वण तागाधारी नीति हो । जसले आम मूलबासी मंगोल जनता पिछडाइए । सडाइए । जो अगुवाइ गर्न दिइएन । बाहुनवादी सिकंजामा फसाइ अन्त गर्दिन्छन । यो त भुमिपुत्र मुलबासी मंगोलले सदियौं देखि भोगी रहेको भोगाइ हो ।
लेखक: -जिबन मंगोल